Hojii Jallisii | | Tenders in Ethiopia
Irrigation Works / Water Construction
Godina Shawaa Lixaatti Waajjirri Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee Aanaa Tokkee Kuttaayee Baajata Sagaantaa Gudinaa Qonnaa(AGP) Ijarsaa Jallisii Indirsii ,Cholee 3 fra Igisa,lagaa qillee fi qoraattii waluuma galaatii jalliisii 5 (Shan) dorgomsiisee caalbaasii ifaatiin hojjaachisuu barbaada.
Ibsa adda addaa
Caalbaasiin kun guyyaa Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxanfamee bahe irraa jalqabee sanada waa’ee meeshaalee ibsu kan qabate guyyoota 21 walittii anaan keessatti Waajjirri Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee Aanaa Tokkee Kuttaayeetti biiroo lakk. 3 qaamaan dhufuudhaan qarshii 300 kan hin deebine kanfaluudhaan bitachuu ni danda’u.
1. Eeyyama Ijarsaa bishaanii Sadarkaa 5ffaa WWC fi isaa ol kan qabu Piroojektii, Jallisii Indirsii, Cholee 3ffaa iggisa fi qoraattii fi Eeyyamaa sadarkaa 8ffaa WWc kan qabu Jallisii lagaa qillee eeyyamaa hojii kan haroomfatee dhiyeeffachuu kan danda’uu fi gibira bara 2012 kanfaluu isaaniitiif ragaa dhiyeeffachuu kan danda’u
2. Tarreeffama dhiyeessitootaa Ministeera Maallaqaa irratti galmaa’uu isaaniitif ragaa dhiyeeffachuu kan danda’an.
3. Galmaa’aa “VAT” / TIN ta’uu isaaniitiif ragaa dhiyeeffachuu kan danda’an.
4. Waajjirichi Finfinnee irraa fageenya KM 125 irratti argama.
5. Dorgomtoonni kabachiisa caalbaasiitiif Gatii dhiyeesee irraa Parsantii 2% CPO Baankiidhaan mirkanaa’een sanada caalbaasii Orjinaalii Teekinikaa waliin dhiyeessuu qabu. Dorgomtoonnan erga Moo’ataa ta’ee booda dhiyaatan walii galtee mallatteessuu yoobaatan CPOn kabachiisa caalbaasiitiif qabsiisan ni dhaalama.
6. Sanada (Dokmentii Caalbaasii )dorgomuuf dhiyeefate haqaa fi laaqa kan hin qabne.
7. Sanada caalbaasii (Dizzayinii fi Ispesifikeeshinii) gaafa 12/02/2013 irraa eegalee hanga gaafa 03/03/2013 sa’aatii 3:30irratti Waajjira MWD A/T/kuttayee lakk. 3 qaamaan dhufuudhaan qarshii 300 kan hin deebine kanfaluudhaan bitachuun hangaa gaafa 03/03/2013 sa’aatii 4:00irratti Sanduuqa Caalbasii qophaa’eeti galchuu dandeesuu.
8. Caalbaasiin kun kan banamu gaafama 03/03/2013 sa’aatii 4:30 irratti bakka dorgomtoonni ykn bakka bu’oonni argamanitti kan banamu ta’uu ni beeksifna.
9. Sanadni caalbaasii Orijinaala Faayinaansii fi teeknika kophaatti Cuqqaalama,akkasumas koppii faayinaansii fi Teeknika isaa kophaatti cuqqalamuu qaba ,walumaa galatti sanadootni lachanuu poostaa gagaan bakka tokkotti kan samsaamee Maqaa ,Teessoo Bilbilaa Dhabbatichaa fi Chaappaa Waajjirichaan kan mirkana’ee ta’uu qaba.
10. Bakkaa Piroojeektiin hojjatamuu qaaman deemun dirqamaa raga isaa orjinaal Teeknika Waajjin dhiyaachuu qaba.
11. Dhabbanii Tokkoo Piroojkeetii Tokkoo ol mo’aate hojjachuu hin danda’uu.
Odeeffannoo dabalataatiif Lakk.Bilbilaa 0112820731/ 0913063404 Waajjirichi Calbaasii kana gar-tokkeen ykn gutuumaa guutuuttii haquuf mirga Guutu qaba. Waajjira Maallaqaafi Walta’iina Diinagdee Aanaa Tokkee Kuttaayee